DAAWO VIDEO: EFASOM oo Tababar ku saabsan kor u qaadida tayada waxbarashada ku qabatay Jowhar – Wakaaladda Wararka Hiilnews
DAAWO VIDEO: EFASOM oo Tababar ku saabsan kor u qaadida tayada waxbarashada ku qabatay Jowhar
By admin on October 28, 2018 No Comment
Axad, October, 28, 2018(HNN) Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay kulan ku saabsan kor u qaadida tayada waxbarashada iyadoo ay ka qeyb galeen xubno ka socda bahda waxbarashada iyo xubno ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Kulankan oo socday muddo labo maalin ah iyadoo ka qeyb galayaasha ay ka doodeen qaabka lagu horumarin karo tayada waxbarashada dalka.
Hay’adda EFASOM ayaa soo qaban qaabisay tababarkan waxana ka qeyb galay 30 ruux oo kala socda bahda waxbarashada, waalidiin. Macalimiin iyo xubno ka socda maamulka Hirshabeelle.
Guddoomiyaha degmada Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe Mudane Cisman Maxamed Muqtaar (Cismaan Baarey) ayaa kula dardaarmay xubnaha ka qeyb galay kulankan inay bulshada inteeda kale la wadaagan waxyabaha ay ku barteen mudadii labada maalin ee barnaamikan socday.
Wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo dhaliinyarada Isbortiga ee dowlad Goboleedka Hirshabelle Mudane Muumin Tuure Cabdullaahi ayaa sheegay in tayada waxbarashada kor loo qaadi karo hadii la helo, Saacadaha waxabarashada, Macallin fiican, Goob Fiican, Muqarar tayo leh iyo Jadwal shaqo.
DAAWO VIDEO: EFASOM oo Tababar ku saabsan kor u qaadida tayada waxbarashada ku qabatay Jowhar added by admin on October 28, 2018